အားလုံး Video Downloader 2018 အခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » အားလုံး Video Downloader 2018
အားလုံး Video Downloader 2018 APK ကို
အားလုံးကဗီဒီယို Downloader ကို 2018 သင်ဤလွယ်ကူသော-to-ကိုအသုံးပြုဖို့လူမှုရေးမီဒီယာကဗီဒီယို Downloader ကို speed.With လျှပ်စီးမှာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်သို့လူမှုရေး webs နဲ့ပေါ်ပြူလာကဗီဒီယိုဆိုက်များမှဗီဒီယိုများနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကလစ်များဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြု, သင်တို့ရှိသမျှသည်လူမှုရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များ browse အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, HD ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များမှ။ အားလုံးကို formats ထောက်ခံနေကြသည်။ 100% အခမဲ့! (လူမှုရေးအကောင့်ပေါ်တွင်သင်၏အဆွေခင်ပွန်း shared ဗီဒီယိုများလည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ )
ဒီ Video Downloader အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို:
* Built-in browser ကိုနှင့်အတူလူမှုရေးကွန်ရက်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုက်ဘ်ဆိုက်များ Browse
* သင်အော့ဖ်လိုင်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်ရှုချင်သောဗီဒီယိုပြဇာတ် button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
* ပု HD ဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
(ဒါမှမဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဗီဒီယိုများလင့်များကူးယူခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်ဤ app ထဲမှာသူတို့ကို paste နိုငျသညျ)
ယင်းနှင့်အတူ * Browse ကိုဗီဒီယိုများ built-in browser ကို
* Play ကိုဗီဒီယိုနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်း built-in ကစားသမားမရှိအင်တာနက်ကြားခံလိုအပ်
တဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူ * ဒေါင်းလုပ် HD ကိုဗီဒီယိုများ
* အကြီးစားဖိုင်ကို download, ထောက်ခံ
* တစ်ချိန်တည်းမှာအတော်ကြာဖိုင်များကို Download
Wi-Fi 2G, 3G နှင့် 4G ဆယ်လူလာကွန်ရက်ကျော် * ဒေါင်းလုပ်ဗီဒီယိုများ
ဗီဒီယိုက extension ကိုလင့်များအားဖြင့် * ပံ့ပိုးမှုဒေါင်းလုတ်ဆွဲ
ခဏရပ်ရန် * အပြည့်အဝ-featured ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ, ပြန်စသည် နှင့် downloads, ကိုဖယ်ရှား
* Save ကိုတစ်ဦးအတွက် file တွေကို download လုပ် စကားဝှက်ကို-protected ဖိုငျတှဲ
ထဲမှာ * ဒေါင်းလုပ်ဗီဒီယိုများ နောက်ခံ
* SD ကဒ် ထောက်ခံ
* အားလုံးဒေါင်းလုပ်ကို formats ထောက်ခံ, MP3, M4A, MP4, M4V, MOV, AVI, WMV, DOC, XLS, PDF, TXT, စသည်တို့ကို
* Google ကရိုးရှင်းသောနှင့်ကြော့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကအနိုင်ရ 2017 ၏အကောင်းဆုံး Play
* ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမအောင်မြင် downloads,
* အစာရှောင်ခြင်းကို download speed ကို
* ဒေါင်းလုဒ် bar မှာတိုးတက်မှု Check
* ဒေါင်းလုပ်ဗီဒီယို, သီချင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများကို
* သင်အကြိုက်ဆုံး websites များအတွက် bookmarks ကို Add
* အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်များကနေဗီဒီယိုအားလုံးကို Download
အားလုံး video download အော်တိုဗီဒီယိုများကို detectသငျသညျကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်အတူသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ အစွမ်းထက်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ သငျသညျခဏနားပြီးကျန်တာတွေကို downloads, ပြန်လည်စတင်, နောက်ခံကို download လုပ်ပါနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအတော်ကြာဖိုင်များကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးဗီဒီယို preview အစာရှောင်ခြင်း download, အော့ဖ်လိုင်းကကစား။
ဆိုရှယ်မီဒီယာများအတွက် video download
အစာရှောင်ခြင်း download, လူမှုမီဒီယာအားလုံးကို Video Downloader အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်များကနေဗီဒီယိုအားလုံးကို။ လူမှုရေးအကောင့်များမှဗီဒီယိုအားလုံးကိုလူမှုမီဒီယာအဘို့ဤလူအပေါင်းတို့သည်ဗီဒီယို Downloader ကိုအတူ download လုပ်ပါ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာများအတွက်အစွမ်းထက်သောဗီဒီယို Downloader ကိုသင်သည်သင်၏ devices များပေါ်သို့အင်တာနက်ကနေဗီဒီယိုအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဗီဒီယိုအားလုံးကို Download နှင့်အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ပါ။
Video Downloader Manager ကို
သငျသညျအစွမ်းထက်သောဗီဒီယို Download Manager ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်ကနောင်တမရကြလိမ့်မည်, ဒီဗီဒီယိုကို Download Manager ကြိုးစားကြ!
Browser ကိုပုဂ္ဂလိက Downloader
အကောင်းဆုံး browser ကိုပုဂ္ဂလိက Downloader ကိုနဲ့ browser download ။ ဤသည်ကို browser Downloader ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာသင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များ Browse နှင့်ဤဘရောက်ဇာကိုပုဂ္ဂလိက Downloader ကိုနဲ့ browser Downloader ကိုအတူ download လုပ်ပါ။
အကောင်းဆုံးနဲ့ရိုးရိုးဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ။ ဒီ Full-featured ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာနှင့်သင်၏ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခံစားပါ။
အစာရှောင်ခြင်း Video Downloader
အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့်အတူဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုပါသလား? ဒီအစာရှောင်သောဗီဒီယို Downloader ကို, စျေးကွက်အတွက်ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်သောဗီဒီယို Downloader ကိုကြိုးစားပါ။
•ဤ app ကိုပိုငျဆိုငျပါဘူးမျှမဆိုရှယ်မီဒီယာ site ကိုအားဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်
•မဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ရပ်များ (အကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ-upload ပြန်) နှင့် / သို့မဟုတ်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအသုံးပြုသူရဲ့တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်ဖြစ်ပါသည်
•ဤ app ကိုအသက်အသုံးပြုသူများအ 13 + နှစ်ပေါင်းအဘို့ဖြစ်၏
- ကွန်ယက် - ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
- Read ရေး SD ကဒ် - SD ကဒ်ရန်သင့်ဆွဲယူတဲ့ဖိုင်တွေသိမ်းဆည်းဖို့
အားလုံး Video Downloader 2018
5.58 ကို MB
အားလုံး Video Downloader
video download မာစတာ
Twitter ကို Download လုပ်ပါ ...